‘जति उपचार गर्दै गयो, उतिनै समस्या थपिदै, निको भइदिए हुन्थ्यो’ | Citizen Post News
सिन्धुपाल्चोक । एक वर्षअघि खुट्टा सुनिएको समस्या लिएर उपचार गर्न बाह्रविसे अस्पताल आएकी सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालाकी-५ मार्मिङकी बुद्धिमाया तामाङ अहिले मृर्गाैला र मुटुको रोगबाट समस्याग्रस्त छिन् । एक बर्षअघि उनको मात्र खुट्टा सुनिएको थियो, सबैले अस्पताल जान भन्दै सुझाव दिएपछि उनी गत वर्ष कार्तिकमा उपचारको लागि बाह्रविसेस्थित रहेको अस्पतालमा पुगिन् ।
तर खुट्टाको उपचार गरेपनि निको नभएपछि उनकाी शरीर विस्तारै गल्दै गयो तर रोग के हो ? नत चिकित्सकले पत्ता लगाउन सके, न बुद्धिमायाले भेउ पाउन सकिन । सोही समस्या बोकेर विभिन्न मेडिकल र क्लिनिकमा धाएकी उनलाई एक्कासी गाह्रो हुँदै आएको छ, तर उनको रोग के हो ? अहिलेसम्म पत्ता लागेन । उपचारका लागि बजार धाउदाधाउदा थाकेकी बुद्धिमायालाई खुट्टाको रोग निको नहुँदै अर्काे समस्याले च्याप्न थाल्यो । उनी भन्छन्, ‘मलाई एउटा रोगले नछोड्दै अर्काे रोग लाग्यो । अहिले शरीर बिस्तारै दुख्न थालेको छ । त्यसपछि धुलिखेल अस्पताल पुगे । तर अहिलेसम्म रोग पत्ता लागेन ।’
पटकपटक उपचारको लागि धुलिखेल अस्पतालमा आउँदासमेत आफ्नो रोग पत्ता नलागेर निराश बनेकी बुद्धिमायालाई धुलिखेल अस्पतालले अन्तिम समयमा मृगौला खराव भएको रिर्पोट देखाइदियो । अस्पतालको रिर्पोटसँगै परिवारका सदस्यहरु चकित मात्र परेनन्, छाँगाबाट खसे सरह बने । धुलिखेल अस्पतालले मृगौंला खराब भएको रिर्पोट दिएपछि उनी अहिले बीर अस्पतालमा डाईलसिस गराईरहेकी छिन् । मृगौंला पीडित बुद्धिमायालाई आर्थिक अभाव कमीका कारण अस्पतालमा भर्ना हुन समेत गाह्रो भएको छ ।
चिनजान र आफन्तसँगको सल्लाहपछि उपचारको लागि बीर अस्पतालमा भर्ना भएकी उनलाई डाईलसिसका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पतालमा पठाईयो । अहिले उनलाई उपचारका लागि खर्च धान्न धौंधौं परेको छ । विरामीलाई डाईलसिसका लागि प्राइभेट अस्पतालमा पठाएपछि परिवारमा थप निराशा छाएको छ । आर्थिक अभावले पिल्छिएको उनको परिवारलाई खान लगाउन समेत मुस्किल छ ।
बुद्धिमायाले भक्कानिदै भनिन्,‘खुट्टाको उपचार गर्न समेत ऋण काटेर अस्पताल आएका थियौं । त्यसमाथि रोग थपिदै गइरहेको छ । अब उपचार गर्न पैसा पनि छैन । सहयोग गर्नुपर्यो ।’ आर्थिक अभावमा गुज्रिएको उनका श्रीमान गणेश श्रेष्ठले भगवान पुकार्नु बाहेक केही बाँकी नभएको सीपोष्ट न्यूज डटकमलाई बताए । उनले ज्याला मजदुरीले मात्रै कसरी पुग्ला र ? कतिञ्जेल परिवारलाई धान्ने ? भन्दै आफ्नो परिवारमाथि बज्रपात पुरेको दुखेसो पोखे । उनको परिवारमा एउटा सानो छोरा छ, परिवारको कुनै आन्दानी छैन, आम्दानीको स्रोत पनि छैन । ऋणमा डुबेर उपचारमा गराइरहेको उनको परिवारले बुद्धिमायालाई कतिञ्जेल बचाईराख्ला ? बीरमा उपचारत बुद्धिमायाको एक्सेरे रिर्पोटले फेरी मुटुको भल्व विग्रिएको देखाएको छ ।
मृगौंलाको उपचार गराइरहेकी उनलाई फेरी नयाँ रोग थपिएको छ तर उनको बाँच्ने आशा भने मरिसकेको छैन । उनका श्रीमान भन्छन्, ‘जति उपचार गर्दै गयो, उतिनै समस्या थपिदै गएको छ, निको भइदिए हुन्थ्यो ।’ उनीहरुसँग १२ हजार रुपैयाँ छैन् तर उपचार गर्र्नलाई लाखौं रुपैयाँको आवश्यकता पर्छ । तैपनि २१ वर्षकी आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउन उनका श्रीमान गणेशले निकै कसरत गरिरहेका छन् । छोरीलाई बचाउन उनका बाबु पनि अनेक उपाय गरिरहेका छन् ।
उपचारका लागि खर्च अभावः
उपचारका लागि खर्च अभाव भएपछि बुद्धिमायाको परिवार राजधानीस्थित विभिन्न स्थानमा व्यानर राखेर सहयोगको याचना गरिरहेको छ । उनको परिवार अहिले एक महिना अघिदेखि राजधानीमा बसेर सहयोग संकलन गर्न थालेको छ । सबैतिर सहयोगका लागि आह्वान गरेपछि देशविदेशबाट अहिलेसम्म २ लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ । मृर्गाैला फेर्न र मुटुको उपचार लागि १२ लाख बढि रुपैयाँ लाग्ने अस्पतालले भनेपछि अहिले उनको परिवार चन्दा संकलनमा जुटेको छ । उनको परिवारले सहयोगका सवैसँग लागि याचना गरिरहेको छ ।